December 2019 - Page 20 of 23 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တိုက်မှုသတင်� ....
editor | Dec 7, 2019 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၆ . ၁၂ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၀၄ ၀၉)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်ဘက်မှ ဗဟန်းမြို့နယ်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုမြတ်မင်းဟိန်း မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမှတ်(7Q – 9602) Hijet အမျိုးအစား(အဖြူရောင်)ယာဉ်သည် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် တစ်ဘက်ယာဉ်ကြောရှိ...
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကော့ဘိန်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ နယ်မြေ(၁၁)တွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Dec 7, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၆ . ၁၂ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၁၂ ၂၀)အချိန်ခန့်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ ကော့ဘိန်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ နယ်မြေ(၁၁)နေ ပိုင်ရှင်ဒေါ်ကွတ်မိန်၏ (၁၅x၂၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း(၂)ထပ်နေအိမ်၏ အောက်ထပ်မီးဖိုတွင် မီးသွေးမီးဖြင့် ပြောင်းဖူးပြုတ်ရာ မီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့်...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ နယ်မြေ(၁၃)၊ မိုးလုံလေလုံလမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Dec 6, 2019 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄ ၅၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ နယ်မြေ(၁၃)၊ မိုးလုံလေလုံလမ်းတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးမောင်ကြီး၏ ယာဉ်အမှတ် (7A/6604) Nissan (အဖြူရောင်) ၆ ဘီး ယာဉ်သည် ကားဝါယာရိန်းပြုပြင်ရာမှ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၄ ၅၃)အချိန်...
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ မှိုဟင်းတောကျေးရွာရှိ နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၀ ၂၂)အချိန်ခန့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ မှိုဟင်းတောကျေးရွာရှိ ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဆွေ၏ (၃၀x၁၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ သွပ်ကာ၊ မြေစိုက် ဂိုဒေါင်တွင်တပ်ဆင်ထားသော ဒါးမိန်း အပူလွန်ကဲရာမှ ဂိုဒေါင်တိုင်အား မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၀...
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးမြို့၊ မြို့မ(၁၂/က)ရပ်ကွက်ရှိ ဆိုင်ကယ်မီးလောင်မှုသတင်း
၅.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၀၉ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တမူးမြို့၊ မြို့မ(၁၂/က)ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ရှင် ဒေါ်လင်းဖာလင်၏ သားဖြစ်သူ လန်ခိုလင်သည် အရက်သေစာသောက်စားပြီး နေအိမ်ရှိ ဆိုင်ကယ်အား မီးရှို့မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၀၉ ၁၀)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့် တမူးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
Page 20 of 23« « Previous...10...1819202122...Next »